WAR DEG-DEG AH: Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo taageeray mooshin xilka looga qaadayo…. – Puntland News.net
Home 2017 April 19 Somali News WAR DEG-DEG AH: Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo taageeray mooshin xilka looga qaadayo….
WAR DEG-DEG AH: Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo taageeray mooshin xilka looga qaadayo….
April 19, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 3
Garowe (Puntlandnews) 19 Abril-2017:- Xildhibaano katirsan gollaha deganaanka degmada Garowe ayaa wada mooshin ay rabaan in xilka lagaga qaado duqa degmada Xasan Maxamed Ciise goodir kaasi oo dabada ka riixayo madaxwayne ku xigeenka Puntland.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sida aan xogta ku helnay waxay isaga iyo duqa Garowe isku qabteen dhulka dowladda ee degmadu maamusho kaasi oo camay doonayey in la siiyo niman ganacsato ah oo ay isku belyihiin.
3 thoughts on “WAR DEG-DEG AH: Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo taageeray mooshin xilka looga qaadayo….”
Wiilwaal April 19, 2017 at 8:02 pm · Edit
Camay mala warsaday in ruux ka soo jeedaa Garowe dhul ama guri kuleeyahay Buuhoodle ama Laascanood? markaad oggoolaataan in dhulka la wada leeyahay ama la wada degi karo markaas ayaad Garowe wax ku sheegankartaan.
Mr awbarakaale April 20, 2017 at 1:43 am · Edit
Salaan ka dib madaxwaynaha xaq buu uu leeyahay in uu dhul bixiyo mar reer garoowe ha ogaadaan in garoowe ay tahay magaaladiii madaxda puntland markaa waa in xilkaa laga qaadaaaa duqa magaalada hadii uu diiday amarka madaxwayne ku xigeenka mahadsanidiin
Samawade April 20, 2017 at 2:04 am · Edit
Waxsa ika talo ah .in marka hore la hubsado sida ay wax u jiraan .dabadeedna qof kasta xaq buu y yeelankaraa in la ga faalooda.